XOG:Uur-ku-taallada Sida reer Khaatumo ugu kala go’een Garoowe iyo Hargeysa | Afrikada
XOG:Uur-ku-taallada Sida reer Khaatumo ugu kala go’een Garoowe iyo Hargeysa
Xilli uu Soomaali muhiim u noqday ereyga “Waanu kala Degannahay” ayaa hadana beelaha dega Waqooyi Bari Soomaaliya waxaa aysan heysan xuquuqdoodii aasaasiga aheyd ee aheyd in ay nabad iyo nolol helaan.
Macno ma laha oo haddii maamulkii Khaatumo la hareereeyay, isla markaasina uu fashilmay, balse dhinacyadii fashilka geystay ee (Garoowe iyo Hargeysa)intaa ugama aysan harin, waxaana ay ka daba tageen Khaatumo iyagoo kala jiitay isla markaasina meel waliba ka dooxay. Dhulkii reer Khaatumo ee waayihii taariikheed caanka ku ahaa sumcad sare iyo taariikhdii Soomaaliweyn waxaa goob dhiig sokeeye lagu daadsho u bedelay labada talis iyagoo Khaatumo u diidan in ay noqoto maamul-goboleed xor ah oo 3-deeda gobol dadka dega (Sool, Sanaag & Cayn) sidaasina wax kula qeybsada walaalaheed fedraalka ah.
Walow maanta uu reer Khaatumo marba tii cowsku u baxo gambarka ag dhigata Hargeysa ama Garoowe hadana weli waa ay u baahan yihiin in sidaa uun lagu nabadgeliyo maadaama labada dhiigyacab aysan u diir naxeynin jiritaankeeda.
Qaadashadii federaalka ayaa gobolladaasi Khaatumo gacanta kor u taageen walow laga hor istaagay maantana waxa Khaatumo lagu soo koobay in maamulada Puntland iyo Somaliland ay u adeegsadaan dhallintaasi jihada dagaallada iyagoo iska horkeenaya hal jufo oo labada dhinac kala adeegsanayaan.